यौन सम्पर्क अघि के चाहन्छन् महिला ? – email khabar | Latest news of Nepal
यौन सम्पर्क अघि के चाहन्छन् महिला ?
प्रकाशित : २०७७ असार ५ गते १६:०६
असार ५ काठमाडौं – यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । एक रिसर्चले यौन सम्बन्ध राख्नु अघि महिलाहरुले के चाहन्छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । रिसर्चको क्रममा करिब ७०० महिलाहरुलाई अध्ययन गरिएको बताइएको छ ।
सो अध्ययनबाट यौन सम्पर्क अघि महिलाहरुले निम्न चाहाना राख्ने गरेको बताइएको छ ।
महिलाहरु आफ्नो पार्टनरले पुरै ध्यान यौन सम्बन्धमै रहोस भन्ने चाहन्छन् । सर्वेमा सहभागी करिव ४२ प्रतिशत महिलाले आफूलाई ध्यान दिएको महसुस भए पुरुषको प्यार बढी अनुभव हुने बताएका थिए । आँखाको हाउभाउ, मुखको क्रियाकलाप, चुम्बन, ओंठमा चुम्बन वा संवेदनशील अंगमा स्पर्ष यौन सम्पर्कको समयमा महिलालाई मन पर्ने अध्यनको निष्कर्ष छ ।
महिलाहरुमा गरिएको शोधमा महिलाले पनि पुरुष जस्तै कण्डम नलगाइ यौन सम्पर्क गर्दा बढी सन्तुष्टी हुने बताए । यद्यपी कण्डम लगाउँदा बढी सुरक्षित महसुस हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।
सर्वेमा सहभागी पाँच जनामा एक महिला मात्र सामान्य तरिकाको सेक्सबाट चरम अवस्थामा पुगेका थिए । अधिकाँश युवतीहरुले पुरुषहरुले हात र मुखको प्रयोग बढी गरेको राम्रो बताए । ९० प्रतिशत युवतीले पुरुषले मुखको प्रयोग गरेपछि मात्र चरम आनन्दमा पुग्ने बताएका थिए ।
महिला शरीर आफैमा संवेदनशील चिज हो । तर पुरुषहरु आफ्नै जस्तो गरेर महिलासँग ब्यवहार गर्छन् । महिलाहरुको संवेदनशील अंगमा पुरुषको स्पर्शले आनन्दित हुने बताइएको थियो ।
आज थपिए ४२६ जना कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या ८ हजार नाघ्यो